नपढी नहुने एउटा सत्य कथा “यो कुनै काल्पनिक प्रेमकथा होइन” | Nepali Christians
नपढी नहुने एउटा सत्य कथा “यो कुनै काल्पनिक प्रेमकथा होइन”
July 30, 2014 10:29 am by: Admin Category: News A+ / A-
काठमाडौ-यो कुनै काल्पनिक प्रेमकथा होइन । वास्तविक कथा हो तर कुनै पनि महान् कथाकारले लेखेभन्दा धेरै महान् प्रेमकथा । यो प्रेमकथा हो, निक भुजिसिक र उनकी श्रीमती कने मियाहाराको । यीनको कथा इन्टरनेटभरी डँढेलोझैँ फैलिएको छ र फैलिरहने निश्चित छ । निक विना हातखुट्टा नै यो धर्तीमा जन्मे । र, उनले आफुले प्रेमिका पाउने कुरा कहिल्यै सोेचेनन् , जोसँग पुरा जिन्दगी बिताउन पाइयोस् ।
‘मलाई पटक्कै विश्वास थिएन, मैले कुनै दिन कोही भेटाउने छु जो मँसँग सारा जिन्दगी बिताउन तयार होस् ।’ उनले केही पहिला एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका छन् । १० वर्षको उमेरमा निकले आत्महत्याको असफल प्रयास गरे तर त्यसपछि भने कहिल्यै पछाडी फर्केर हेरेनन् । आत्मविश्वास बढाउँदै लगे । हार नमान्ने प्रण लिए । जित्छु भन्ने भिष्म प्रतिज्ञा गरे ।
अनि त एक दिन उनले आफ्नो राजकुमारी कनेलाई भेटाए । पहिलो भेटमै उनिहरुले एक अर्कालाई मन पराए । ‘जस्तो रुपमा उनी छन् , त्यही रुपमा मैले उनलाई मन पराएँ । मैले शारिरीक भोकलाई प्राथमिक ठानेर त्यो भन्दा पहिले अर्को केटासँग सम्वन्ध स्थापित गरेको थिएँ तर मलाई दिक्क लाग्यो ।
मैले जे खोजेको थिएँ , निकबाट पाएँ ।’ कने भन्छिन्, ‘उ भौतिक रुपमा मात्रै मेरो पति होइन, आत्मिय रुपमा पनि मेरै ।’ जब उनले निकलाई २००८ मा भेटिन् , उनलाई निकको आत्मविश्वास र हँसाउने कलाले मोहित पार्यो । ‘उ ह्यान्ड्सम र मेरा लागी योग्य बर थियो ।’ निकलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । भन्छन्, ‘चट्याङ परेजस्तो । यो केटी मेरी नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । नभन्दै..।’
कतिलाई लाग्दो हो, निकको शारिरीक अशक्तताको कारण उनीहरुको सम्वन्धमा अप्ठ्यारोपना त आउँदैन ? निक भन्छन् ,‘केही समस्या छैन । ओहो, त्यस्तो छँदै छैन । हामी एक अर्काप्रति बहुत आशक्त छौँ ।’ कने भन्छिन् । ‘उसलाई र मलाई आवश्यक सबै चिज उसँग छ ।’ विहा गरिसकेपछी उनिहरुले अमेरिकाको दक्षिण क्यालिफोर्नियामा घरजम गरे । निक प्रेरणा र आत्मविश्वासका बारेमा इसाई बिश्वासको बारेमा लेख र प्रचार गर्दै संसार डुल्छन् । कने एउटी असल श्रीमतीका रुपमा घरमै काम गर्छिन् ।
खुशीमाथी अर्को खुशीको कुरो, एक दिन कने गर्भवति भइन् र एउटा स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिइन् । निक १९८२ अस्टेलियाको मेल्बर्नमा जन्मे । आप्नै प्रयत्नमा १७ वर्षमा लाइफ विदवाउट लिम्ब नामको संस्था स्थापना गरे । उनको खुट्टा नभएपनि दुइटा पाइताला छन् र एउटा पाइतालमा दुइवटा औँला छन् । ३२ वर्षे यी युवाले प्रेरणा सम्वन्धि येशुख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्दै विश्वका दर्जनौँ देश घुमिसकेका छन् । लाखौँका श्रोतामाझ आफ्नो अनुभव साटेका छन् ।
निक अहिले इसाई प्रचारकका प्रख्यात प्रचारक हुनुहुन्छ l
परमेश्वरले उहाँको परिवारमा आशिष देउन l
नपढी नहुने एउटा सत्य कथा “यो कुनै काल्पनिक प्रेमकथा होइन” Reviewed by Admin on Jul 30 . काठमाडौ-यो कुनै काल्पनिक प्रेमकथा होइन । वास्तविक कथा हो तर कुनै पनि महान् कथाकारले लेखेभन्दा धेरै महान् प्रेमकथा । यो प्रेमकथा हो, निक भुजिसिक र उनकी श्रीमती क काठमाडौ-यो कुनै काल्पनिक प्रेमकथा होइन । वास्तविक कथा हो तर कुनै पनि महान् कथाकारले लेखेभन्दा धेरै महान् प्रेमकथा । यो प्रेमकथा हो, निक भुजिसिक र उनकी श्रीमती क Rating: 0
नम्रताको उचाई...आज ढुंगा बोलिरहेको छ l...